Umboniso waseJapan, unqwenela ukuba iApple isebenzise izikrini ze-OLED | IPhone iindaba
Abakho bambalwa abasebenzisi abajonge phambili kumhla xa iApple isungula i-iPhone enesikrini se-OLED esinika imibala eqaqambe ngakumbi kwaye sisebenzise ibhetri encinci (ukuba kusetyenziswa imvelaphi emnyama), kodwa kunokuthiwa IJapan Display, Omnye wabathengisi ababonisa iApple, unqwenela ukuba uCupertino enze utshintsho. Kwaye i-JDI ibhengeze ilahleko engaphezulu kwe-257 yezigidi zeerandi (31.800.000 ¥) ngo-2016 ngenxa yokunyuka kwexabiso leYen kunye nokwehla kwentengiso ye-iPhone kunye ne-iPad.
Njengoko nisazi nonke, ii-iPhone 6s zisebenzisa isikrini seLCD, kodwa kulindeleke ukuba banike Xhuma kwizikrini ze-OLED ngo-2017, Kwimeko elungileyo. Ukuba ayingunyaka ozayo, i-iPhone 8, okanye nayiphi na ifowuni abayibonisa ngo-2018 ibizwa, izakufika nescreen se-OLED kwaye, kamva kwaye ukuba sijonga indlela ukwaziswa kwezixhobo ze-iOS kule minyaka idlulileyo, incinci ixesha elithile kamva baya kuphehlelela i-iPad enesikrini se-OLED.
Abaphathi baseJapan bathandaza ukuba iApple yenze umtsi kwimiboniso yeOLED
Kodwa ukuba ibingomnye wabaphetheyo kwiJapan Display, ngekhe ndibenabo bonke xa uTim Cook kunye nenkampani betsiba kwizikrini ze-OLED: Samsung Ngumvelisi obaluleke kakhulu kuphando lwesikrini se-OLED kunye nemveliso ye-AMOLED kwaye, ngokwamahemuhemu, ikwakha indawo apho banethemba lokwenza izikrini zeApple. Ngayiphi na imeko, abantu baseCupertino abayithandi into yokufaka zonke iiodolo kwinkampani kwaye, ngokuxhomekeke kumgangatho kunye nexabiso lemveliso, banokubeka iiodolo ezingaphezulu nangaphantsi nakwiJapan Display.
Ingxaki, okanye enye yazo, kukuba i-Samsung ayisiyiyo kuphela ingxaki yokubonisa iJapan: Foxconn Ikwafuna ukungena kwimakethi yokubonisa ye-OLED, eyathengwa nguSharp. Ngokuchasene nale mvelaphi, siyakuqonda ukuphelelwa lithemba kwabaphathi be-JDI.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » IJapan Display, inqwenela ukuba iApple isebenzise izikrini zeOLED
Iimoto zikaGqirha Panda, zasimahla ixesha elilinganiselweyo